UNGAZITHOLA KANJANI IZINDEBE EZIPHINKI NGOKWEMVELO - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLE
Ungawathola Kanjani Amalebe Apinki Ngokwemvelo Ekhaya
Ikhaya Ubuhle Ukunakekelwa komzimba Ukunakekelwa Komzimba oi-Monika Khajuria Ngu Monika khajuria ngoJanuwari 29, 2020
Izindebe ezimnyama nezikhanyayo zingaba imbangela yokukhathazeka. Izindebe ezimnyama ziyabonakala ebusweni bakho ngenxa yokungafani nobuso bakho bonke. Kungonakalisa ukubukeka kwakho futhi kunyakazise ukuzethemba kwakho. Ukwehla kwamanzi emzimbeni, ukulimala kwelanga, ukubhema ngokweqile nokungabi nokunakekelwa okufanele kungaba yisizathu sezindebe zakho eziminyene nezimnyama.
Uma ukumnyama kwezindebe kuyinkinga obhekene nayo futhi, sekuyisikhathi sokukhulisa ukunakekelwa kwezindebe zakho. Namuhla, sikukhethele ezinye izeluleko namakhambi amangalisayo angenza izindebe zakho zithambe, zibe luhlaza, zikhuluphale futhi zikuvimbe ekufiphaleni.
Gcina i-Hydration On
Ukugcina isikhumba sakho simanziwe kuyisinyathelo sokuqala esibheke ezindebeni ezinempilo nezondlekile. Izindebe ezinamanzi yizindebe ezijabulayo. Ukoma ngeke nje kubangele ukuqhekeka kodwa nezindebe ezimnyama. Sebenzisa i-lip balm usuku lonke ukugcina udebe lwakho lumanzi. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezindebe zebhotela ezitholakala emakethe eziqonde ngqo ezingeni lokuswakama lezindebe zakho.
Ngakho-ke, sebenzisa i-lip balm noma i-lip bhotela ukuze uthambisa izindebe zakho njalo nangomusa.
Ukukhipha Izindebe Kubalulekile
Njengesikhumba sakho, izindebe zakho nazo zidinga ukukhishwa. Faka i-lip scrub esimisweni sakho sokunakekelwa kwesikhumba ebusuku. Ukukhipha uphethiloli kuzosusa izindebe ezixege futhi eziqhekekile ukuze zikushiye nezindebe ezithambile nezikhuluphele.
Kanye noma kabili ngesonto, ngemuva kokuba usuhlanze isikhumba sakho ukuze ulale, sebenzisa umuthi wezindebe ukukhipha izindebe zakho ngobumnene. Uma usuqedile, gqoka umuthi wezindebe bese uyolala. Uzovuka ngezindebe ezithambile nezibushelelezi.
Ukulimala Kwelanga Kungaba Inkinga Yangempela
Izindebe zakho nazo zingaba mnyama ngenxa yomonakalo welanga. Sithatha izixwayiso eziningi uma kukhulunywa ngokuvikela isikhumba sethu emisebeni ye-UV eyingozi, kodwa ngeshwa hhayi uma kukhulunywa ngezindebe zakho.
Thola i-lip balm efakwe nge-SPF. Uzothola izinketho eziningi emakethe. Faka i-lip balm ezindebeni zakho noma nini lapho uphuma khona ukuze uthole ukuvikelwa kanye nokuswakama.
Gcina Izindebe Zihlanzekile Futhi Zisha
Siyazithanda izindebe zomlomo. Kusukela kumatte kuya kokucwebezelayo, sigqoka imidwebo ehlukahlukene kanye nemithunzi yezindebe zomlomo. Kodwa, linda! Uke wacabanga ukuthi amakhemikhali afakwe kulezi zingqimba zomlomo kungenzeka ukuthi yini eyenza mnyama izindebe zethu?
Hlanza izindebe zakho njalo ebusuku ngaphambi kokuba ulale. Ungalokothi ulale ngomlomo noma ngomkhiqizo oshibhile wezindebe. Yiba mnene futhi unake. Imvamisa singaphuthelwa yimikhiqizo ekuqhekekeni okuncane kwezindebe zethu. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi ugcina izindebe zakho zihlanzekile, zintsha futhi zithambile.
Shintshela Kumanzi Wama-Micellar
Njengoba kushiwo ngenhla, amakhemikhali afakwe kwimikhiqizo angaba mnyama izindebe zakho. Futhi lokho futhi kuyiqiniso ngokuhlanza kwakho. Abahlanzi abafaka amakhemikhali anokhahlo benza umonakalo omkhulu kunokuhle. Yomisa izindebe zakho futhi izenze zibe mnyama nazo.
Enye indlela enhle kulaba bahlanza abanzima ngamanzi amancellar. Ihlanza izindebe ngendlela enhle futhi emnene ngangokunokwenzeka. Mane nje uthathe amanzi e-micellar kuphedi likakotini, ufake ezindebeni zakho imizuzwana embalwa bese usula ukwakheka.
Yeka Ukubhema Njengamanje!
Naka imikhuba yakho yokuphila engaba nesandla ekwenzeni mnyama kwezindebe zakho. Ukubhema kuwumkhuba onjalo. I-nicotine esogwayi ingafiphaza i-melanin, ingxenye enquma umbala wesikhumba sakho, futhi yenze izindebe zakho zibe mnyama. Uma ufuna izindebe ezi-rosy, kubalulekile ukuthi uyeke ukubhema.
Ngenkathi sisemikhubeni yokuphila, singaphinde siphakamise ukuthi ungaze usebenzise noma yimuphi umkhiqizo ophelelwe yisikhathi ezindebeni zakho. Kungadala ukungezwani komzimba, yomise izindebe zakho uzenze mnyama.
Izixazululo Zasekhaya Ekutakuleni
Ngazo zonke lezi zeluleko, unganakekela nezindebe zakho futhi uvimbele ukuba mnyama kwezindebe usebenzisa amakhambi asekhaya anomsoco. Lezi zenziwe ngezithako zemvelo ezithambisa izindebe zakho futhi zikunikeze izindebe ezi-rosy, ezithambile nezithambile.
1. Ushukela onsundu noju
Njengoba ishwabene ekubunjweni, ushukela usiza ukukhipha isikhumba ngobumnene  . Uju luyisidleke semvelo esikhunjeni esengeza umswakama ezindebeni zakho, silugcine luthambile futhi lukhanye futhi [okubili] .
1 tbsp ushukela onsundu
Endishini, thatha ushukela onsundu.
Faka uju kuyo bese uhlanganise kahle ukuze uthole ingxube eshisiwe.
Faka ingxube ezindebeni zakho bese uyihlikihla cishe imizuzu.
Yishiye eminye imizuzu emihlanu ngaphambi kokuyihlanza.
Phinda leli khambi izikhathi ezingu-2-3 ngesonto.
2. Ulamula noju
I-Lemon yaziwa ngokukhanyisa kwesikhumba nokukhanyisa kwayo  . Le nhlanganisela izovimbela isikhumba sakho ukuba some futhi sibe mnyama.
2 tsp ijusi kalamula
2 tsp uju
Endishini, hlanganisa zombili izithako ndawonye.
Faka ingxube ezindebeni zakho.
Yiyeke ivulekele cishe imizuzu eyi-15.
Yihlanze kamuva usebenzisa amanzi abandayo.
Phinda leli khambi izikhathi ezingu-1-2 ngesonto.
3. Ushukela nobisi ukhilimu
I-lactic acid ekhona obisini ikhukhumalisa isikhumba sakho ukuze isuse noma yimaphi amangqamuzana esikhumba afile ngaphandle kokuwashiya omile  .
iphakethe lobuso le-multani mitti aloe vera
1/2 tbsp ushukela
1/2 tbsp ukhilimu wobisi
Hlanganisa zombili izithako ndawonye esitsheni.
Faka ingxube ezindebeni zakho bese uhlikihla izindebe zakho okwemizuzu embalwa.
Hlanza kahle ngokuhamba kwesikhathi.
4. I-aloe vera neyogathi
I-aloe vera neyogathi yizona zinto ezondlayo nezithambisa izindebe. I-aloe vera ithoba kakhulu futhi ihambisa amanzi ezindebeni ngenkathi i-yogurt ihlinzeka ngokukhishwa okuncane  .
1 tbsp ijeli le-aloe vera
Endishini, thatha i-aloe vera gel.
Faka i-yogurt kuyo uphinde uhlanganise kahle.
Faka ingxube ezindebeni zakho bese uyihlikihla kahle imizuzu engaba mi-5.
Uma usuqedile, yihlanze kahle.
5. Beetroot noshukela
Lokhu ukuxubana okuhle uma ufuna izindebe ezinomsoco, ezithambile. Ngaphandle kokungeza i-hydration ezindebeni zakho, i-beetroot isebenza njengebala lezindebe lemvelo lezindebe  .
2 tbsp ushukela
Khipha ijusi ku-beetroot bese uyiqoqela esitsheni.
Faka ushukela kuyo uhlanganise kahle.
Khuhla izindebe zakho usebenzisa le ngxube imizuzu engu-4-5.
Phinda leli khambi kanye ngesonto.
6. Ijusi lepomegranati
Ecebile ngovithamini C, ujusi wepomegranati awondli izindebe nje kuphela kodwa futhi unezela nombala omuhle.
1 tbsp ijomegranate
Gcoba ujusi wehalananda ezindebeni zakho.
Yishiye ihora lonke.
7. Ikhofi noju
Uma ufuna ikhambi lezindebe ezimnyama nezomile, lena yiyona engcono kakhulu oyitholile. Ikhofi likhipha izindebe zakho ngenkathi uju engeza umswakama nobumnene kulo.
I-1/2 tbsp ikhofi egayiwe
1/2 tbsp uju
Endishini, thatha ikhofi.
Faka uju kuyo bese uyixuba ukuze uthole ingxube erhabaxa.
Faka ingxube ezindebeni zakho bese uyihlikihla ngayo imizuzu engaba mihlanu.
8. Amafutha e-almond nolamula
Izici eziwohlokayo zamafutha e-alimondi ahlanganiswe nezinto ezikhanyayo zikalamula zenza lokhu kuxube ikhambi eliphelele lezindebe ezomile, eziqinile nezimnyama  .
1 tbsp amafutha ka-alimondi amnandi
Thatha amafutha e-alimondi esitsheni.
Cindezela ulamula kuyo bese uhlangana kahle.
Faka ingxube ezindebeni zakho bese uyihlikihla imizuzu emihlanu.
Yiyeke iqhubeke elinye ihora.
Phinda leli khambi zonke izinsuku ezihlukile.
ukusetshenziswa kwamafutha wesinaphi ngezinwele
ugadi ngumkhosi odumile wombuso
kanjani ukususa ilanga tan ezandleni kweso
kanjani ukwandisa umfutho kwabesifazane
yimuphi umugqa okhombisa uthando lomshado ekubhalweni kwesandla